Xildhibaan ka tirsan Barlamaanka UK oo loo geestay Dhaawac
HomeWararka CaalamkaXildhibaan ka tirsan Barlamaanka UK oo loo geestay Dhaawac
October 15, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Xildhibaan Sir David Amess oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka UK ayaa lagu dhaawacay dhaawacay weerar loo adeegsaday mindi oo ka dhacay deegaanka laga soo doorto ee Leigh-on-Sea oo qiyaastii 64 km u jira magaalada London.
Amess, oo 69 jir ah, ayaa kulan weji-ka-weji ah la lahaa dadka soo doorta, kaasi oo ka dhacayey kaniisad lagu magacaabo Belfairs Methodist Church, markii weerarka uu dhacay.
Qof ka mid ah dadkii kulanka joogay ayaa soo qoray “Davis Amess waa la tooreeyey, wax yaab leh ayaa halkan ka dhacay.”
Wararka ayaa sheegaya in David lagu daweynayo isla goobta uu weerarka ka dhacay. Ma cadda heerka uu le’eg yahay dhaawaca gaaray.
Booliska Essex, oo ah maamulka ay hoos tagto magaalada Leigh-on-Sea ayaa qoraal ay soo saareen ku xaqiijiyey in xireen nin lagu tuhmayo weerarka, islamarkaana uu baaritaan socdo.
“Ma raadineyno cid kale oo weerarkan lala xiriirinayo, mana rumeysnin inay jirto halis kale oo hadda taagan oo ay shacabka wajahayaan,” ayaa lagu yiri qoraalka booliska.
Illaa iyo hadda ma cadda ujeedka laga lahaa weerarka.
Sir David Amess ayaa ah xildhibaan aaminsan siyaasadda midigta-fog. Wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada sida weyn u taageeray ololihii Brexit ee UK ay kaga baxday Midowga Yurub. Waxa uu sidoo kale marar badan kasoo horjeestay sharciyo baarlaman oo lagu taageerayo xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isguursada.